CoQ10 100mg - Megafit Nutrition
Home Shop CoQ10 100mg
အမျိုးအမည်နံပါတ : 000-03.
အမျိုးအစားများ: CoQ10, ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးမျာ, အဓိကအရာများ.
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူး : နှလုံးကျန်းမာရေး
နှလုံးသွေးကြောစနစ် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသည်
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စွမ်းအင်နှင့် ကလာပ်စည်းပမာဏကို တိုးတက်စေသည်
အသိအမြင်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်
အရေအတွက် : 30 / 60
အမျိုးအစား : ဂျယ်လီပျော့
တိုက်ကျွေးရမည့် ပမာဏ : ဂျယ်လီပျော့ 1 တောင့်
ဆေးညွန်း : 100 မီလီဂရမ်
CQ-10 MegaFit Nutrition – CQ-10astrong antioxidant and supports heart health. CoQ-10 playsavital role in production of energy in the body. TakingaCoQ-10 supplement helps increase natural CoQ-10 levels that can be depleted by age and cholesterol lowering Statin Medications.
Antarctic Krill Oil Omega-3 Complex